[chqpxta ka usoro nkuzi mgbado xkwx n’qrx si emetxta ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ n’qmxmx edemede Igbo;
ileba anya ka jenda si emetxta ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ ma a kuziere ha edemede Igbo;
[chqpxta ma mpaghara ebe xlqakwxkwq d[ e nwere mmetxta n’ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ n’qmxmx edemede Igbo;
[mata ka mmekqr[ta usoro nkuzi na jenda si emetxta ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ n’qmxmx edemede Igbo.
[chqpxta ka mmekqr[ta usoro nkuzi na mpaghara ebe xlqakwxkwq d[ si emetxta ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ n’qmxmx edemede Igbo.
Kedu ka usoro nkuzi mgbado xkwx n’qrx si emetxta ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ n’qmxmx edemede Igbo?
Olee etu jenda si emetxta ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ n’qmxmx edemede Igbo?
Kedu ka mpaghara ebe a rxnyere xlq akwxkwq si emetxta ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ n’qmxmx edemede Igbo?
Kedu ka mmekqr[ta mmetxta usoro nkuzi na jenda si emetxta ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ n’qmxmx edemede Igbo?
Olee ka mmekqr[ta usoro nkuzi na mpaghara ebe a rxnyere xlqakwxkwq si emetxta ihe nnweta n’ule xmxakwxkwq siniq sekqnd[r[ n’qmxmx edemede Igbo?